हँसायो, हँसायो कांग्रेसले बेस्सरी हँसायो
कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँमा ३ घण्टा पक्राउ गरेर छाडियो, अघिल्लो दिनको साटो भोलिपल्ट उनले पुलको उद्घाटन गरे । र, प्रतिक्रिया दिए– अझै राणा शासन गएकै रहेनछ । पेलेर शासन गर्ने सरकार अधिनायकबादी हो ।
चुपचाप सत्ताबादी बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बल्ल ब्यूँझिछन्, गुर्जिहाले– मङ्सिर २९ गते ७७ जिल्लामै नेकपा नेतृत्वको सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्रको भण्डाफोर गर्न बिरोध जुलुस र सभा गरिनेछ ।
निदाएको बाघ ब्यूँझिएकै हो त ? चुनावमा कम्युनिष्टसँग हार खाएर सेलाएको कांग्रेस तातेकै हो त ? नेकपाको सरकारले कांग्रेसी नेताका भ्रष्टाचारका फाइल खोलिदिन्छु भन्यो भने फेरि मौनब्रत पो बस्ने हो कि ? शंका छ ।
प्रश्न के हो भने कोभिड–१९ले आक्रान्त देशको अर्थव्यवस्था, आमनागरिकले पाएको पीडा, बाँडेको भात खानुपर्ने बाध्यता, भारतलगायतका विदेशबाट आएका लाखौं युवाले गरिखान नपाएपछि कोरोना लागे लागोस् भनेर विदेशतिरै फर्कन थालेको दृश्यले कांग्रेस कहिले उठेन । न्याय व्यवस्था चरमराएको, सत्तावादीले नाताबाद र पैसाबादमा सत्ता सञ्चालन गरेको, सत्ताबादी पार्टीभित्र सत्ताको हानाथापले प्रशासन नै अस्तव्यस्त भएको, राष्ट्रपतिले नेकपा भित्रको झगडामा चासो राखेर न्यायाधीश भइरहेको, संविधानले कामै गर्न नसकेर संवैधानिक संकट उत्पन्न भइसकेको विषयमा समेत कांग्रेसले केही बोल्दै बोलेन ।
धानखेती लगाउने बेलामा मल आएन । ठेकेदारहरुले कामै गरेनन् । राज्यको ढुकुटीको व्यापक दुरुपयोग भइरह्यो । राज्य सम्पत्ति कौडीका मूल्यमा सेटिङ मिलाएर ठेक्कामा दिइयो, स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार भयो । अहँ, नेपाली कांग्रेस अर्थात प्रमुख प्रतिपक्षले केही पनि देखेन । बोल्दै बोलेन, बोल्नुपर्छ भन्ठानेन ।
बरिष्ठ नेतालाई निषेधाज्ञा किन तोडेको भनेर ३ घण्टा पक्राउ गरेर छाड्दा कांग्रेसभित्र भुइँचालो नै गयो । २९ गते देशव्यापी बिरोधसभा गर्न हतारियो ।
हँसायो, नेपाली कांग्रेसले हँसाउनुसम्म हँसायो । जग हँसायो ।
प्रतिपक्षी दल छ भन्ने अनुभूति कसैलाई पनि छैन । सरकार मनलागी निर्णय गरिरहेको छ । सत्ताको कोटा लिएर प्रतिपक्षी मौन बसिरहेको थियो । अधिवेशन समयमा बोलाउने सवालमा समेत कांग्रेसले मुख खोलेन । हत्या बलात्कारका घटना बढेका छन्, कांग्रेसले सरकारलाई झकझक्याउने काम गरेन । नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्रवादी पार्टी भन्छ आफूलाई, प्रजातन्त्रको सुन्दरता के हो, असुन्दरतामात्र किन भइरहेको छ, नेपाली कांग्रेसले सत्तालाई सवक सिकाउनु पर्दैन ? अहँ, सत्ता निरंकूशता र सर्वसत्ताबादी भइरहेको छ, कांग्रेस रमाइलो मेला हेरे झैं हेरिरहेको छ । आफ्ना नेतालाई ३ घण्टा पक्राउ गरियो भनेर कांग्रेसलाई रिसको पारा चढ्यो । आम नागरिकलाई सरकारले दिएको दुःख कष्टमा मतदाता मैत्री नीति लिनुपर्नेमा नेतामैत्री नीति लिएका कारण कांग्रेसले चुनाव हारेको हो । यही चाला हो भने आउने चुनावमा पनि कम्युनिष्टले कांग्रेसलाई लतार्न सक्छ । यहाँसम्म कि बैकल्पिक पार्टी हामी भनेर अघि सरको राप्रपाले पनि उछिन्न बेर छैन ।
भूकम्प गयो, बाढीपहिरोले धेरै मरे, कोरोनाले पन्द्रौसय मानिस मरिसके, उपचार नपाएर मर्ने मरिरहेका छन्, खान नपाएर मर्नेको हिसावै छैन । अहिले मीनपचास सुरु भएको छ, जाडोले कति मर्ने हुन् । जनताको सवाल किन बोल्दैन, बोल्न सक्दैन नेपाली कांग्रेस ? जनता नै नदेख्ने कस्तो प्रजातन्त्रबादी पार्टी यो ?